Thelọ ọrụ mmepụta ihe kwesịrị ịhọrọ ala PVC na nnukwu nguzogide abrasion! -News-Topflor China amachi
Echiche:64 Onye edemede: Onye ndezi saịtị Bipụta Oge: 2019-06-03 Mmalite: Saịtị
Ajụjụ ndị ahịa na-ajụkarị, a na-eji ụlọ PVC eme ihe ugbu a n'ọtụtụ dịgasị iche iche, nke kachasị na-etinye uche na ụlọ akwụkwọ, ụlọ akwụkwọ ọta akara, ụlọ ọgwụ na ebe ndị ọzọ.
Enwere ike iji ya na ụlọ ọrụ mmepụta ihe? Azịza ya bụ ee, PVC flooring bụ nke otu nnukwu ngalaba, nke ụlọ nrụpụta ihe na-eguzogide ọgwụ dị mma maka ojiji na ogbako ahụ.
Onodi na-eyi na-eguzogide ala na-emekarị adopgen homogenous penetrating Ọdịdị. Uru ya bụ na enwere ike ịmecha ya ma megharịa ya ugboro ugboro, nke na-eme ka ndụ ọrụ nke ụlọ ọrụ na-eyi uwe na-eguzogide ọgwụ dịkwuo ukwuu.
Nke abuo, na-eyi na-eguzogide ala nke ogbako a na-emeso ya na a pụrụ iche n'elu oyi akwa, nke nwere àgwà nke acid na alkali eguzogide, nke nwere ike n'ụzọ dị irè gbochie corrosion nke mmanụ stains na solvents na ogbako na ịgbatị ọrụ ndụ.
N'oge nwụnye, ogbako ahụ na-eyi na-eguzogide ala dịkwa mma. Ọ na-abụkarị na ebe obibi ihe ruru otu puku square mita, ọ na-ewe ụbọchị 1,000 iji tọgbọ ya ozugbo, enwere ike iji ya mgbe etinyere ya, nke dị mma.
Ihe karịrị afọ 20 ahụmahụ, Topflor bụ a na-eduga egwuregwu flooring emeputa ke China. Topflor na-enye ọtụtụ ụdị ihe eji egwu mmiri, gụnyere ụlọ egwuregwu, mgbatị na ebe mgbatị ahụ. Ndị SGS, CE, LABOSPORT, BWF, ITTF, INTERTECK kwadoro ... ejirila Topflor flooring ọtụtụ egwuregwu na mba ụwa gụnyere egwuregwu Olympic, World Championship, Asia Games, wdg...
Kedu ihe m kwesịrị ị paya ntị na mgbe m na-azụ PVC plastic floor for shopping malls?